Farxadda 4ta Luulyo! Waa Bixin Karta Wadaniyad Baraha Bulshada | Martech Zone
Farxadda 4ta Luulyo! Waa Bixin Karta Wadaniyad Baraha Bulshada
Sabtida, Juun 4, 2015 Sabtida, Juun 4, 2015 Douglas Karr
Dalka Mareykanka, waxaan maanta ugu dabaaldegeynaa Maalinta Xorriyadda… haddii kale loo yaqaan Luulyo 4deeda. Wadaniyadu waa mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidan kara dareenka badan isla markaana dhisi kara sinaan sumadeed. Warbaahinta bulshada, dabcan, waa kanaal ku habboon kaqeybgalka dhageystayaashaada shaqsi ahaan. Isku soo xoori labadoodaba waxaadna haysataa fursad weyn oo aad ku muujin karto wadaniyadaada oo aad kuhesho saamiyo waawayn hadii aad shucuur ku shidato waxyaabaha ku jira
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka helo infographic this Cabir la'aan bil ka hor si aad waqti ugu hesho inaad isku diyaariso, laakiin waad calaamadeysan kartaa boggan si aad isugu diyaariso bisha Juun ee soo socota! Unmetric wuxuu bixiyaa 5 talaabo oo lagu abuurayo nuxur fasax fasax leh oo loogu talagalay dhagaystayaasha bulshada:
Soosaar ilahaaga lana abuuro qorshe
Hel xog-dhiirigelin iyadoo dib loo eegay nuxurkii sifiican uqabtay sanadkii kahoreeyay.
Qabyo iyo Abuur content filaayo in channel kasta iyo dhexdhexaad.
Qaybinta waxyaabaha ku habboon ee kanaal kasta.
Qiimee si loo hagaajiyo oo abuuro olole ka wanaagsan sanadka dambe!
Tags: qorsheynta fasaxamaalinta Madax-bannaanidamaalinta xorriyadda infographicJuly 4thaan qiyaas lahayninfographic aan xad lahayn
Sida Noocaagu ugu guuleysan karo Suuq Geynta